Banyere Anyị - Baron (China) Co., Ltd.
E guzobere Baron (China) Co., Ltd. na ntinye ego nke Baron Group International Holding Co., Ltd. Ọ bụ ụlọ ọrụ abụọ dị mkpa, Besuper na Baron na-akwado ya, bụ nyocha na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa, ọrụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ na-enye aka nke ụmụ ọhụrụ.
Branddị ndị nwere aka ha
Ewezuga azụmaahịa OEM, afọ a, ụlọ ọrụ anyị, dabere na ahụmịhe afọ nke otu ahụ na mmata ahịa nke ọma, kwalitere ọtụtụ ụdị ndị nwere onwe ha iji nye ndị na-azụ ahịa ngwaahịa dị oke ọnụ ma dị ọnụ ala, gụnyere Besuper Fantastic T Diapers, Pandas Eco Perskwà mmiri, bornlọ ọhụrụ amụrụ ọhụrụ, wdg, nke ndị na-azụ ahịa hụrụ n'anya nke ukwuu.
Zụlite & Nyekwa Ngwaahịa ODM
Anyị na-azụlite ngwaahịa ODM maka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na-echekwa onwe onye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ site na ịge ntị, ịlele na iche echiche banyere mkpa ndị ahịa. Ngwaahịa dịgasị iche iche, dịka akwa akwa ụmụaka, nhicha mmiri, akwa akwa ndị okenye, akpa mkpofu eco-friendly, akwa nhicha ụmụ nwanyị na ngwaahịa nlekọta onwe onye ndị ọzọ iji gboo mkpa ndị ahịa.
Adịchaghị Ahịa Ahịa Ngwaahịa
N'ihi na afọ, anyị ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike iji guzobe ogologo oge ekwenye mmekọahụ na ịdị ọcha na ngwaahịa ụlọ ọrụ nile nke ụwa.Our ụlọ ọrụ na-anọchi anya a ọnụ ọgụgụ nke elu-edu ụdị, gụnyere Cuddles, Morgan House, Nne Choice, Pure Power, wdg. Anyị na-enye ngwaahịa nlekọta ụmụaka, ngwaahịa nlekọta ndị okenye, ngwaahịa nlekọta ụmụ nwanyị, wdg, ma zute ihe dị iche iche nke ndị ahịa.
Ezigbo Nduzi Otu
Otu ndi ndu okacha amara duziri ulo oru a n’oge ahia ahia. Echiche ohuru emeela ka anyị kwalite ngwaahịa anyị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Africa, Australia, United States na gburugburu ụwa.
Na ọtụtụ afọ nke ahịa ahụmahụ, ọgaranya ngwaahịa ihe ọmụma, obi ike na otutu echiche, anyị ahịa otu dị iche iche ahịa na-enye nke kacha mma na ngwaahịa na kasị chie anya ọrụ.
N'ihi nhazi ọkọlọtọ, ịzụ ahịa etiti ewetala anyị uru ọnụ ahịa akụrụngwa; ike njikwa nke mmepụta usoro amụbawo na ọnụego nke okokụre ngwaahịa na belata na-eri, otú anyị nwere ike inye ndị ahịa na elu mma na oké ọnụ price ngwaahịa.
Anyị bụ ndị na-azụ ahịa nke ezigbo ikikere nduzi nke ụlọ ọrụ diaper, mgbanwe kwa ụbọchị nke ihe emelitere na teknụzụ, hụ na mmelite ngwaahịa na-aga n'ihu n'oge yana njikwa njikwa ngwaahịa.
Mechie nwa ọhụrụ, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin, Super Absorbency Adult metụ akwa, High Quality Eco metụ akwa, Mezie metụ akwa, Metụ nwa,
Metụ nwa, Mechie nwa ọhụrụ, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin, High Quality Eco metụ akwa, Mezie metụ akwa, Super Absorbency Adult metụ akwa,